ကိုရင်နော်ခင်လေးငယ်: အမိုက်စား ဝါသနာလေးများ
ကယ်.... ဝါသနာအရ ကျွန်မ တစ်ရေးတမော အိပ်လိုက်ပါဦးမယ်.... :P
အချိန် 9:22 PM
ခင်လေးက အရေးကောင်းပဲ...! နောက်များမှ တက်ဂ်ရဦးမယ်...
သာမီးတို့ ကသူ့အန်ဖတ်တွေ လာလာရှု့နေရတာပေါ့..
သွား.. ကောင်းဘူး.. လူဇိုးလေး..
(နဖူးကို လက်ညှိုးလေးဖြင့် တွန်းလျှက်ပြော)
ငါ..တို့ က အန်ဖတ်တွေလာလာကြည့်နေရတာပေါ့..
အရမ်းတူတယ်ဗျာ။ အမှန်အကန်တွေချည်းပဲ အန်ချခွင့်ပေးတဲ့ ဘလော့(ဂ်)အတွက် ဘလော့(ဂ်) များနေ့တောင်လုပ်သင့်တယ်။
၀ါသနာတွေက အရင်ပို့စ်ဟောင်းတွေမှာထဲက မှန်းမိထားတား) ခုတော့ ပိုသိသွားပြီး ။ အိပ်တာတော့ တူတယ်ဗျို့ ကျနော်လည်း စိတ်ညစ်လည်းအိပ် ပျော်လည်းအိပ် အိပ်တာ ကျန်းမာရေးလည်းကောင်းတယ်တဲ့ ဟဟားး။ ရေးပေးတာ ကျေးဇူးပါဗျို့ ။
မိနော် အကြွေးကျန်သေးသည် :P
မိနော်မ မလေးက တော့အန်ချကုန်ပြီ..ညဉ်းကော မအန်ဘူးလား...ကောင်းပါတယ် ကိုယ့်ဘလော့ခ်ကိုယ်
မူးအန်တော့..ရှင်းမယ့်လူရှိတယ်...မိနော်မ လာစမ်းဒီနားကို..အမယ် အမယ် လန်တန်တန် ပျံတန်တန်နဲ့...တီးလိုက်ရလို့ သောတတွေ ရေဆေးပစ်လိုက်ရမယ်..ဟွန်း..မလေး အန်ထားတာတွေ ရှင်းလိုက်ဦး..မလေးရေ..အိပ်လွန်း
ရင်လည်း မကောင်းဘူးနော်..visit myanmar year ရုပ်လိုဖြစ်နေမယ်နော်..ကျန်းမာရေးအတွက်လည်း မကောင်းဘူး...နောက်တစ်ခါ ဘလော့ခ်လာရင်တော့ နှာခေါင်းကာလေး တပ်လာရမယ်..မိနော်မ သေသေချာချာ အလုပ်လုပ်နော်..ဟွန်း ။
ပြောချင်ဘူး ပြောချင်ဘူး ပြောကိုပြောချင်ဘူး
(ခင်မင်သဖြင့် စနောက်ခြင်းအား စိတ်မဆိုးသောသူသည် မိတ်ဆွေကောင်းပီသ၏တဲ့ ဟီးးးး)
ကိုမိုးမြင့်တိမ် ရေးထားတာ ဖတ်ပြီး အော်ရယ် သွားတယ်ဗျို့ ဟီးးဟီးး)
ဟေး.. မိပြီ တရားခံ။ ဆင်ဆင် အနော့်အိမ် လာလည်တိုင်း အန်ဖတ်စော်တွေ နံပြီးကျန်ခဲ့တာ မမခင်လေးလက်ချက်ကြောင့်ကိုး။ နောက်ဆို ဆင်ဆင် အိမ်လာရင် ရေချိုးခဲ့... ဂွိ
အင်း.. အမြင့်ကတော့ ၀ုန်းသွားပြန်ပြီ...
ဒီမှာလဲ မငယ်ကြီး အံဖတ်တွေ မြင်ပြီး...((ဝေါ့)) (ပြောရင်းတောင် ပျို့လာတယ်) ကိုယ်လဲ အံအုန်းမှလို့ တွေးမိတာပါ..။
မိနော်ရေ.. အားတဲ့အခါ.. ပိုကာလေးဆွဲရအောင်.. ဘီအီးလေးပါ ၀ယ်ခဲ့အုံး။ အမြင့်က အပုန်းမဟုတ်တော့ဘူး အ၀ုန်းဖြစ်နေပြီဆိုတော့ ဘီအီးလည်း ဆွဲမယ့် သဘောမှာရှိတယ်။ :D
ကိုရင်နော် ပြန်ဖွတာ ဂယ်လား မခင်လေး...
ဝါသနာ ကိုပြောင်းပြန်အချိုးနဲ့ ဖတ်ရမလားလို့ ....
ကိုရင်ဖော် လုပ်သွားပြီ ...
ခင်လေးဝါသနာပြီးတော့ ကိုရင်နော်အလှည့်လေ..သူဆက်ရေးရင် ခင်လေးကပြန်ပြောပေါ့..း)
ဟားဟားဟားလို့ရီသွားပါတယ် .. အကုန်ပေါ်ကုန်ပြီ .. ညီမလည်း လာရှုသွားကြောင်း :D:D
sweet dreams to you @ days or nights.
နှိပ်စက်ဖို့ကြံနေတယ်ပေါ့... ဒီမှာ အိပ်ပျော်နေတယ်နော်.. ဟီးး
ဒါကြီး နဲ့ မကြီးနော်...
မီးမီးအန်တာ နံဖူးဘဲ ဂယ်ပြောတာ
နှင်းဆီနံ့လေးတွေတောင်မွှေးလို့ပါနော်.. (((ဝေါ့))) ရဝူးနော် :P
ဘလော့ဂ်များနေ့ သတ်မှတ်မှ အန်ဖို့ စုထားဦးမယ်.. ဟက်
တို့မောင်နှမက ဝါသနာတူတယ်နော့.. သွေးစည်းပါ..
သေနာ ငမူး ငရင်နော်...
ထွေထွေထူးထူးတော့ ဘာမှမပြောတော့ပါ.. ငါ့ကို နံမည်ဖျက်တဲ့ နင့်ကိုတော့
ဘဝအဆက်ဆက် ကမ္ဘာမကျေပဲ.. ကောင်စုတ်
အဲ့ကောင်မ မိနော်ကို သတိထားပေါင်းပါ..။
အန်ဖတ်က နှင်းဆီနံ့လေး မွှေးပါတယ်
သူ့ဖာသာ မူးပြီး အန်ချင်တိုင်း ရောချရဝူးလေ..
ဒင်းဖွသမျှတော့ ကြည့်ယုံနော်.. ဂယ်ဟုတ်ဖူးရှင့်
သူဖော်တာ ယုံနဲ့.. ကောင်းသောနေ့မှာ အိပ်စက်နေပါသည်..။
ငမူးက မူးတိုင်း ပေါက်တတ်ကရ ပြောနေကြ ယုံရဝူးနော်
မှန်၏.. အိပ်၏... နေ့ရော ညပါ Sweet dream ချင်ပါ၏။
မမခင်လေးရဲ့ ၀ါသနာနဲ့ စိမ်းစိမ်းတော့ ၉၀ရာခိုင်နှုန်းတူနေပြီ.. ဟဲဟဲ
ဘလော့ဂ်တကာလိုက်ပြီး ၀ါသနာတွေလိုက်ကြည့်နေတာ... ရှောင်ရန်ဆောင်ရန် သိအောင်လို့ :P
မမခင်လေးရဲ့ အန်ဖတ်များကို လာရှူစားသွားကြောင်းပါ... :)
ထင်တော့ထင်သား ဒီဘလော့မိသားစုဆီ လာလည်ရတာ အန်ဖတ်နံ့တွေ နံနေပါတယ်လို့ ထင်သာက ဦးနော် မူးပြီးများ သောင်းကျန်းပြီး အန်ထားလားလို့ လတ်စသတ်တော့ တီငယ် လက်ချက်ကို အဟား ပျော်ရွှင်ပါစေ တီငယ်ရေ
အားတော့လည်းအိပ် မအားတော့လည်း စိတ်ရှုပ်လို့အိပ်
တယောက်တည်းငေးတာ.. ၀ါသနာ ပါသတဲ့ လား ညီမလေး
တယောက်တည်းငေးတော့.. အတွေးလေးတွေ ထွက်တာပေါ့ နော်
မခင်လေးငယ်ရေးတဲ့ ၀ါသနာလေးကလည်း တစ်မျိုးလေးဖတ်လို့ကောင်းတယ်ခင်ဗျ။ ကျွန်တော် နှာခေါင်းလေး ပိတ်ပြီးဖတ်သွားပါတယ် ခင်ဗျာ။
ရီချင်လို့ တကူးတက လာပြီး စာကြွေးတွေ မြေလှန်ဖတ်နေတာ။ မခင်လေး ၀ါသနာကိုသိလိုက်ရပြီ။ ဟိုလူ ကိုရင်နော်တို့ ၊ကိုမိုးမြင့်တို့ comment က ရေရေလည်လည် သိုင်းထားတာ ရီရတယ်။
SAK NAY WOON said...
မ... ရေ မွန်လဲလာဖတ်သွားတယ်... ငါ့အမကြောင်းလဲသိနေတော.ကိုရင်နော်ပြောတာနဲ့အသူ့စကားကိုယုံရင်ကောင်းမလဲစဉ်းစားနေတာ... နှစ်ခုလုံးကမှန်နေသလိုဘဲလို့... ဟီးဟီး